Waaheen Media Group » Q2aad Rajada Dalka Somalia,Duulaanka Dalalka Shisheeyaha+Dagaalyahanada Alshabaab iyo (Qormo Taxane ah oo Xanbaarsan Xiise,Xaqiiq iyo Xog Dhab ah)
Browse:Home Articles Q2aad Rajada Dalka Somalia,Duulaanka Dalalka Shisheeyaha+Dagaalyahanada Alshabaab iyo (Qormo Taxane ah oo Xanbaarsan Xiise,Xaqiiq iyo Xog Dhab ah)
Q2aad Rajada Dalka Somalia,Duulaanka Dalalka Shisheeyaha+Dagaalyahanada Alshabaab iyo (Qormo Taxane ah oo Xanbaarsan Xiise,Xaqiiq iyo Xog Dhab ah)
(Qalinkii Weriye C/risaaq Yuusuf Cali “Terra”) Email:terra-10@hotmail.com Tell:00252-63-4211904
Intii aanan Gudaha Xafiiska Afhayeenka Gelin Hal Saac in ku dhow ayaanu debeda taagnayn, kuma leexan karno dhirta hadhaca leh si’aan u hadhsano, kulayl saayid ah ayaa jira Dadka ajaanibka ah ee na dhaaf dhaafaya lug iyo Gaadiidba waxay noo sii eegayaan si quudhsi iyo yasitaan kujiro ama ay muwaadiniin cunsuriyiina iyagu yihiin anaguna ajaanib aan nahay.
Shakhsiyan waxaan dareemayaa diiqad iyo cidhiidhi xad dhaaf ah, dareen ahaana qalbiga ayaan ka ooyayaa , kulka iyo jawiga kama damqanayo hayeeshe gumaysiga arxandarida ah iyo bahdilaada ajinabiga ayaan qalbiga uga ilmaynayaa, saaxibadayda ila socda ma garankaro dareenkooda aniguse marba marka kasii dambaysa waan sii gubanayaa, naftayda oo aan Ciil iyo Cadho ku cadibay mooyaane majirto wax kale oo aan samayn karo.
Hal Cabaara markaanu fadhinay ayaa waxa dhinaca xeebta kasoo baxay in kabadan dhawr iyo sodon hablood oo dhalinyaro soomaaliyeed ah, waa gabdho yar yar da’dooduna qiyaastii u dhaxayso 17jir ilaa 19jir magaranayo waxa keenay meeshan ilaa afar dumar ah oo waaweyn ayaa la socda, saaxiibaday kii iigu dhawaa ayaan hoos u weydiiyey anigoo taxadiraya kadib isagoo dhoola cadaynaya oo malaha aniga ila yaaban ayuu yiri magaranayee inaga dhaaf.
Gabdhii yar yaraa sidii loo soo waday ayaa waxay isku wada shubeen gaadhi dheer oo bus ah, toos ayuu u dhaqaaqay.
Halka uu aaday waan isweydiiyey, waxa hablaha meesha loo keenayna waan isweydiiyey jawaabse umaan helin, lakin waxaan shaki ku jirin in habeenkii xalay ahaa habluhu halkan u hoydeen sababkastaba hawgu hoydeene.
Cimiladu aad ayey u kululayd kolkii Qasriga Afhayeenka oo run ahaan aad uqurxoon aanu soo galay daqiiqado Gudahoodba waxaa na saaqay awooda Qaboojiyeyaasha Qasrigaas ku xidhan, Hool weyn ayaanu ku xeroonay Nusasaace ayaanu fadhinay intii aanu afhayeenka sugaynay Cidina cid lama hadlayn waxaana hore laysugula soo dardaarmay gudaha kolkaynu galo qofna yaanu hadlin, Cidna yay wax faalayn,iyadoo weriyeyaashu ay ka cabsi qabaan Camera qarsoon inay meesha taal.
Wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo deg degsan ayaa noo soo galay kadib wuxuu nagu yidhi afhayeenkii ayaa soo socda ee hala istaago, Diiniyan waa amar khaldan haseyeeshe dan baa tiri, waanu wada kacnay kadib waxaa soo galay nin aan aad u weynayn oo labada dhinac lagala raacayo laba calan oo aan is idhi kolay malaha Amisom bay u gaar yihiin, waayo hore umaan arag.
Shirkii jaraa’id ayuu bilaabay wuxuuna aad uga hadlay dedaaladooda nabad raadinta iyo guulaha ay ka gaadheen la dagaalanka shabaabta waxaa kaloo uu sheegay in dalal kalena ay ciidamo military keeni doonaan Somalia, Amisom na ay Ciidamadooda kusoo biirin doonaan Ciidamo Police ah oo ka hawlgala Gudaha Somalia.
Sidoo kale waxa uu xusay inaan Ciidamada wadanka Etoobiya ee ka hawlgala Gudaha Somalia aanay kamid ahayn Ciidamada Amison isla markaana aanay talada iyo amarka meel kawada qaadan.
Su’aalo dhawr ah ayaa lawaydiiyey, kadib kolkii sikooban uu uga jawaabay, ayaan farta taagay kadibna istaag ayuu yidhi waxaan u sheegay meesha aan kasocdo iyo magacayga kadib waxaan Su’aalay “Afhayeen maadama aad sheegtay Dagaalkii aad kula jirteen kooxaha alshabaab Guulo aad ka gaadheen Xiligana dalka ay ka dhalatay dawlad rasmiyi maxay tahay sababta keenaysa in Dalal kalena Somalia c iidamo military usoo diraan, Amisomna ay boolis keento? Wakhtigee baase adiin qorshaysan ama ugu talo gasheen inaad dalka ka baxdaan?
Saaxiibaday hal mar ayey isoo wada eegeen iyagoo aad uwada naxsan, Af hayeen Cali fadhiga inta uu kasoo kacay ayuu si karoox iyo Hadidaadi ku jirto istaag igu yidhi.
kadib isagoo si hoos ah u hadlaya ayuu iigu jawaabay adigu ma waxaad tahay kuwa taageersan alshabaab, joogitaanka Amisom iyo imaatinka Ciidamo kale maxaad u dhibsanaysaa adigaan kula hadlayaa ayuu iyidhi.—————-Lasoco.